Dr Henook Gabbisaa: 'Ida'amni Lammaa Magarsaa hir'ise ida'ama miti' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright OPDO - Official
Ida'uu jennee dubbanna yoo ta'e, namoota biyyattiif oolmaa olaanaa olan kan akka Obbo Lammaa Magarsaa ofiirraa hir'isaa gonkumaaa ida'ama dhugaa fiduun rakkisaadha jedhan, Yunivarsitii Waashingteeniifi Leetti barsiisaa Seeraa kan Dr. Henook Gabbisaa.
Dr. Henook har'a BBC'tti akka himanitti, namoota siyaasa biyyattii keessatti bakka olaanaa qaban ofiirraa hir'isaa, yaada isaanii hi'risaa, amantaa isaanii hir'isaa, ida'amuun hin danda'amu jedhaniiru.
Yaadni walitti baqu kanarratti Obbo Lammaan akka hin fudhannee shakkiin jiraatulleen amma isaanumarraa dhagahuun mirkanneeffachuu kan himan Dr. Henook, ''walqoodiinsi kunis ammaan tana ta'u kan hin malledh," jedhu.
Kanaafis sabanii yoo eeran, ''waldhabdee umamuun mooraan qabsoo Oromoo harcaa'uu hin qabaatu jedhee waanan amanuufiidha,'' jedhaniiru.
"Obbo Lammaa Magarsaas ta'e MM Abiy Ahimad, namoota biyyattiif oolmaa guuddaa oolan waan ta'aniif mataa walitti qabachuu qabu. Gaaffii uummata Oromoo deebiifna yoo jedhan, nuti hooggantoota uummata Oromooti yoo jedhan, MM Abiy yaada Obbo Lammaa Magaarsaa dhaggeeffachu qabu,'' jedhu Dr Henook.
Odeeffannoo biroo kana waliin walqabatan kana keessaa dubbifadhaa:
'Oromoon har'allee ciniinsuu keessa jira'
Aanga'oonni Itoophiyaa dimokiraasii ijaarra yoo jedhan, yaada mormiis keessummeessu qabaatu jedheen amana kan jedhan Dr Henook, ammas murteen ida'amuu madda waldhabdee ta'e kun keessa deebiin ilaalalamu qabaata jedhaniiu.
Yaadni Obbo Lammaa yaada nama dhuunfaa miti
Yaadni Obbo Lammaa yaada nama dhuunfaa osoo hin taanee akka yaada uummata Oromiyaatti ilaalamu qabaata. 'Keessattuu Obbo Lammaan jaarmiyaa siyaasaa Oromo kan ta'e ODP uummata Oromootiin walitti araarsuun nama oolmaa guuddaa ooleedha jedheen amana, jedheera.
''Ummata Oromoofi sirna siyaasa biyya sanaa kan walitti araarseedha.'' Kanaafuu nama kana sagaleesaa hi'isuun hin ta'u kan jedhan Dr Henook, ''ida'amni Lammaa Magarsaa hir'ise ida'ama miti'' jedhaniiru.
Waldhaggeettiin dhiibee garaa garummaan cime ammoo siyaasni biyya sanaa balaa guddaarra bu'uu mala jechuun yaaddoo qaban ibsu.
Haalaa amma jiruun Dr Abiy kana kan fudhatan hin fakkaatan kan jedhan hayyuun seeraa kun, nageenyaafi cee'uumsa biyyaattiif jecha garuu dhaabbatanii ilaaluun dirqama jedhaniiru.
Kana malees, mooraan qabsoo Oromoo bakka tokkootti funaanamee, gaaffiin uummata Oroomofii gaaffiin saboota biyyattii kan biraa akka deebiyuuf kan fedhan yoo ta'e, Abiyyiifi Lammaan waliin ta'anii hojjachuun diraqama jedhaniiru.
'Siyaasa jechuun aartii kennannii fudhachuuti'
Abiyiifi Lammaan osoo aadaafi afaan tokko qabaniifi uummata tokkoof qabsaa'anu walii galiigalteen hojjachuu dhabuun adeemasa siyaasaa keessatti baayyee rakkisaadha, jedhu.
Siyaasni mataansaa aartii walii kennanii fudhachuu waan ta'eef, adeemsa siyaasaa keessatti wal dhaggeeffachuufi yaada mo'aadhaafis moo'amuun murteessaadha jedhu Dr. Henook.
Dr Henook BBC'tti akka himaniiti, MM Dr Abiy yaada Obbo Lammaatiif dursa kennuu qabu. Sababiinsaas yaadni Obbo Lammaa yaada siyaasaa olaanaafi bilchaataa ta'eefidha jedhaniiru.
Ejjennoon 'Paartii Badhaadhinaa' Afaan Oromoof carraamoo yaaddoo?
Walitti baquun gaaffii ummata Oromoo kan deebiisu yoo ta'ee rakkoo hin qabaatu kan jedhan Dr Henook, haata'u malee, ijaaramni haaraan gaaffii akka sabaatti gaafatamaa tureefi deebii quubsaa kan kennu natti hin fakkaatu jechuun shakkii qaban ibsu.
Kanaafuu Dr. Abiy dhaabbatee Obbo Lammaa waliin marii ifaafi haqa qabeessa ta'ee taasisuufi adeemsa isaa irra deebiin ilaalu qabas jedheera.
Kana malees, Obbo Lammaan qoondaala motummaa olaanaa ta'ee osoo jiruu gaaffiifi deebiin inni raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin taasisee akka hin dabarfamneef dhorkamuusaa gaddisiisaadha jedhaniiru.
Image copyright Dr Henook Gabbisaa FB
Goodayyaa suuraa Dr Henook Gabbisaa
Wal-dhaggeettiin dhibnaan maaltu ta'a?
Siyaasa biyyattii haala barbaadamuun fuulduratti tarkaanfachiisuuf waligalteen Abiyyiifi Lammaa murteessaadha kan jedhan Dr Henook, kana gochuuf gaheen olaannaa MM irra akka jiruu dubbatu.
Waliigalteen gidduu isaaniitti uumamuu hafnaan garuu, haalli siyaasa biyyattii gara hin taaneetti deemuu danda'a jechuun yaaddoo jiraachuu malu akeeku.
Kanas yoo ibsan, Obbo Lammaa Magarsaa gara aangoo gadhiisuutti deemuu danda'u kan jedhan Dr Henook, kana jechuun ammoo Lammaan gara mormitummaatti ce'u jechuudha jedhaniiru.
'ODP'n diigamee 'Paartiin Badhaadhinaa' Oromiyaatti milkaa'uu danda'aa?
Kana malees Lammaan tarkaanfii akkasii fudhata taanaan, namoonni hooggansa Lammaatti amanan waan jiraniif adda qoodiinsa guddaa siyaasa keessatti uumuun, MM Abiy irratti gufuu oolaana ta'u mala sodaa jedhu qabaachu himu.
Keessattuu filannoo dhufurratti sagaleen uummataa akka harca'u taasisa jedhaniiru.
Karaa biraatiin ammoo paartiilee mormitoota Oromootiif carraa guddaa bana jedha Dr Henook.
Obbo Lammaan maal jedhanii?
Ministarri Ittisa Biyyaa Itoophiyaafi Itti aanaa dura taa'aan ODP, Obbo Lammaa Magarsaa, falaasama Ida'amuufi walitti baquu paartiilee jalqabarraa kaasanii akka hin fudhanne ejjennoo isaanii ibsaa ifa taasiseera.
Gaaffiifi deebii kaleessa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin taasisanii: ''Walumaagatti jalqabarraa kaasee walitti makamuutti kan hin amannee ta'uu kiyyaa koree hojii raawwachuftuufis hundaafuu bal'inaan ibseen jira" jedhaniiru.
''Walitti baquun paartii kanaa sirri miti, sirri ta'ulleen amma yeroosaa miti jedhee waanan amanuuf ejjannoo kiyyaa kanaan ala of taasiseen jira,'' jedhuu Obbo Lammaan.
Sababii isaas yoo himan: ''Tokkooffaa nuti hooggantootni Oromoo sabni nu amanee gaaffii gurguddaa nutti kenneetu jira. Nutis isiniif deebiifna jennee waadaa galleerraaf.
Kanaafuu gaaffii uummatichaa ODP'n osoo hin deebisiin paartii haaraa dhaabuun waadaa nyaachu ta'a,'' jedhan.
Paartileen ADWUI walitti makamuu paartilee irratti walii galanii mirkaneessuu ibsaa jiru.
Lammaa Magarsaa: ''Of ta'anii argamuu abbaa kiyyarraan baradhe''